War-murtiyeedkii kasoo Baxay Shirkii London ee Soomaalida. |
War-murtiyeedkii kasoo Baxay Shirkii London ee Soomaalida.
Shirkii arrimaha Soomaaliya oo maanta ka dhacay aqalka Lancaster House ee magaaladda London, oo ay si wadajir ah shir gudoominayeen dowladda UK, madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo xoghayaha guud ee qaramada midoobey ee Antonio Guteres ayaa waxaa laga soo saaray War-murtiyeed.
hirkan oo in ka badan 42 dowladood iyo ururo caalami ah oo daneynaya arrimaha Soomaaliya ay ka qaybgaleen ayaa madaxdii ka qeybgashay ay isku raaceen is Soomaaliya uu ka jiro isbedel dhanka horumarka ah.
warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa koobayay arrimaha bani’aadanimada, xoojinta amniga dalka, xasilooni siyaasadeed oo loo dhan yahay, dardargelinta dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo qorshaha cusub ee taageeradda dowladda federaalka Soomaaliya.
Akhriso Qodobadii ugu muhiimsanaa ee War-murtiyeedka oo lasoo Koobay.
1. (Humanitarian) Arrimaha bani’aadanimada;
Ilaa shan qodob ayuu ka koobnaa waxaana ugu muhiimsanaa in walaac laga muujiyay xaaladda bani’aadanimo ee Soomaaliya xilliga ka jirta, waxaana loogu deeqay $600 boqol oo milyen oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen, lana aqoonsaday dadaalada gudiga gurmadka iyo dadka kale ee is xilqaamay.
2. (Strengthening national security) xoojinta amniga qaranka;
Waxaa sidoo kale la isku raacay qorshaha amniga qaranka ee dowladda Sooomaliya iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen 16 bishii tagtay.
3. (More Inclusive Stable Politics) xasilooni siyaasadeed oo loo dhan yahay
Waxaa kale oo la go’aamiyay ahmiyadda ah leedahay in la sii wado wadahadaladii u dhxeeyay dowladda iyo maamulka Somaliland, iyadoo la soo dhaweeyay hamiga dowladu u heyso arintaas.
Waxaan rajeynaynaa in doorashada madaxtinimada ee Somaliland oo dhici doono November 2017 ay keeni doonto fursad lagu dar dargelinyo wadahadalka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka.
Waxaa kale oo la soo dhaweeyay doorka qurbe joogta ee horumarka dalka ay ku leeyihiin.
4. (Accelerating Somalia’s Economic Recovery ) dardargelinta dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka
Dhaqaale xoogan in la horumariyo waxaa ay keeneysaa in nolshada dadka Soomaaliyeed kor loo qaado lana sameeyo shaqo abuur.
Xoojinta dakhliga gudaha ayaa aasaas u ah in la yareeyo u nuglaansha baaraha in la adkeeyo xasiloonida ayaa qeybka ah horumarinta iyo u adkeysiga xaaladaha adag una baahan in la sameeyo qorshe horumarineed oo joogto ah.
Waxaa la soo dhaweeyay qorshaha dowladda cusub oo ah la dagaalanka musuqa iyadoo madaxda dowladda dhexe iyo dowlad-goboleedyada lagu adkeeyay in ay xoojiyaan arintan isla markaana talaabo adag laga qaado dadka lagu helo musuq iyo wax isdabo marinta.
5. (New Partnership for Somalia/Qorshaha cusub ee Taageerada Somaliya)